Tahriibayaal ku geeriyooday Libya
29 Dec 29, 2012 - 6:19:06 AM
Tahriibayaal Somali iyo Eritraen isugu jira ayaa ku dhintay dalka Liibya, kadib markii lagu soo qariyay gaari ay dusha sare ka saaran tahay Shamiito taasoo la sheegay inay ku duntay halkaasna ay ku dhinteen tahriibayaasha.
Waxaa la xaqiijiyay inay dhinteen 18 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 32 kale oo isugu jira rag iyo dumar, iyadoo Safiirka Somalia ee Libya uu sheegay inay ku jiraan qabanqaabada aaska maydadka.
"Shilku wuxuu habeen hore ka dhacay deegaan bari kaga beegan Tripoli qiyaastii 150-km, waxaana halkaas ku dhintay 16 Somali ah iyo 2 ruux oo u dhashay dalka Eritera" ayuu yiri safiirka oo intaas ku daray in dadka gaariga ay dhimashadu ka dhacday la socday ay ahaayeen 120-qof.
Maydadka ku dhintay shilkaas ayaa waxaa ku jiray 6 gabdhood oo dhalinyaro ah, kuwaasoo ka mid ahaa Tahriibayaasha doonayay inay u safraan dooni si ay u gaaraan dalalka Yurub.
Dadkii ka badabaday shilkaas ayaa ku xiran xabsi ku yaala Magaalada xarunta ah ee Tripoli, kuwaasoo ay ku jiraan 18 gabdhood oo Somali u badan, iyadoo aan la hayn magacyada dadkii ku dhintay shilka gaari ee ka dhacay Liibiya.
Safiirka Somalia ee Libya C/qani Wacays ayaa ku tilmaamay dhacdadan mid xanuun badan oo ku habsatay Somalida Tahriib doonka ah, isagoo sheegay inay soo gudbin doonaan magacyada dadka ku dhintay shilka.
Wadanka Libya ayaa wuxuu marin u yahay Kumanaan Afrikaan ah oo doonaya inay galaan dalalka Liibiya waxaana dadkaas u badan Somali iyo Eritrean, iyadoo badda u dhexeysa dalka Liibiya iyo Dalka Talyaaniga ay sannad walba ku dhintaan boqolaal qof oo Tahriibayaal ah.